အရမ်းများနေလား Robert Taibbi မှ LCSW မှ - သင်၏ ဦး နှောက်သည် porn တွင်ဖြစ်သည်
ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ Robert Taibbi, LCSW
porn တစ်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် ပို. ပို. လေးနက်သောပြဿနာဖြစ်လာနေသည်။ ခန့်မှန်းခြေ 20-30 သန်းအမေရိကန်များ (အဆင်ပြေအများစုယောက်ျား) နေ့စဉ် porn ကြည့်ရှုနေကြသည်။ porn နှင့်အတူရွှဲနေသောကြောင့်သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုဓာတုဗေဒအတွက်အပြောင်းအလဲများ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန် Viagra လိုငယ်ရွယ်လူကြီးများ (နောက်တဖန်ဟုတ်ကဲ့, ယောက်ျား) ၏အိမ်ရှင်ဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပို. ပင်စိတ်ပျက်ဖွယ် porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသက်, သူတို့အခြားသူတစ်ဦးနှင့်အတူမည်သည့်အဖြစ်မှန်-based ဆက်ဆံရေးများရှေ့တော်၌ထိုညစ်ညမ်းလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာအဓိကအပြောင်းအလဲများအတွက်သူကိုသားသမီးများအပေါ်သက်ရောက်မှု (10 အဖြစ်အချို့သောအဖြစ်ငယ်ရွယ်) ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဖြစ်ကောင်းစွာစုံတွဲဆက်ဆံရေး၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခြမ်းပေမယ့်သိသာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်မသာကမောက်ကမဖြစ်စေရန်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါ porn စှဲရှိပါတယ်။ နှင့်အရက်ကဲ့သို့အသို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးဝါးများ, မှီခိုနှင့်စွဲအကြားဒီမှာဒဏ်ငွေလိုင်းလည်းမရှိ။
မြဲသငျသညျကြာသပတေးနေ့အားဖြင့်ထွက်ပြေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ညနေပိုင်းတွင်ကော့တေးအဘို့အ4pm မှာမျှော်လင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါအရက်များကက်ဘိနက်ထွက်စစ်ဆေးနေ - မှီခိုတဲ့ဆွဲခြင်း, တဏှာဖြစ်ပါတယ်။ စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးသင်တို့တွင်အသူဌေးကဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကျော်သွားတစ်ခု option ကိုတစ်ဦးထိတ်လန့်ဖန်တီးခြင်းမရှိဘဲလုပ်နေတာတည်းဟူသောအတွေးမဟုတ်ပါဘူး, သင်ကမထိန်းချုပ်နိုင်, ပတ်လည်ဆောက်လော့။
porn အင်တာနက်အထူးသဖြင့်အစွမ်းထက်ကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ပါတယ်။ ရုံဘိန်းဖြူစှဲလမျးသူသို့မဟုတ်အရက်ရဲ့သည်းခံစိတ်တိုးအဖြစ်, ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းစေရန်ရေးဆွဲသူတို့အဘို့ပါပဲ။ သငျသညျစာသားအထဲက run ဘယ်တော့မှ - Fortuanately သို့မဟုတ်ကံမကောင်းသစ်ကိုသမျှအဆင့်ကိုသငျသညျအလိုရှိကြသည်တွင်ဖြည့်ဖို့အဆင်သင့်အမျိုးအစားများနှင့်ဆိုဒ်များတစ်ခုအဆုံးမဲ့အမျိုးမျိုးရှိ၏။
နောက်ဆုံးငါတို့သည် oxytocin။ ဒါကယောက်ျားတွေများအတွက်စွဲ clinches အရာဖြစ်တယ်။ oxytocin သစ်ကိုကူညီပေးသည်သောဓာတုဖြစ်ပါသည် မိဘများ သူတို့ရဲ့ကလေးငယ်မှနှောင်ကြိုးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှနှောင်ကြိုးမှမေတ္တာ၌ကရြောကျတဲ့သူစုံတွဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မဆိုပေးထားနေ့ရက်တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အ oxytocin အဆင့်ကိုလူထက်ပိုမိုမြင့်မား 10 ကြိမ်သလောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ကြောင်းနှင့်အတူသူမ၏စာသားချိတ်ဆက်ခံစားရရန်အဘို့အက (သူကမမျှော်လင့်ဘဲသူမရဲ့ပန်းပွင့်တတ်၏, ထိုဟင်းလျာများ washes) အများကြီးယူမထားဘူး။ အဘယ်အရာကိုယောက်ျားအဘို့အ oxytocin တိုးပွါး? သင်ကမှန်းဆ - လိင်, အထူးသ အော်ဂဇင်။ ယောက်ျား porn watch အဖြစ်သူတို့များသောအားဖြင့်အော်ဂဇင် (အာရုံခံ mirror မှကျေးဇူးတင်စကားနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ သဘာဝ သူတို့ဆိုသောအရာသည် oxytocin ကိုတိုးပွားစေပြီးထို့နောက်သူတို့သည်ညစ်ညမ်းသောနှောင်ကြိုးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ (porn နှင့် ဦး နှောက်တို့၏အကျဉ်းချုပ်ကိုအောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပါ)
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဓာတုဗေဒနှင့်ဇီဝြဖစ်စဉ်ပေါ်သွားနေစဉ်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြားပြဿနာများလိုပဲ, ညစ်ညမ်းသည်အခြားပြဿနာများမကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့အားပြဿနာများဘာတွေလဲ? တချို့ကဖွယ်ရှိသံသယရှိသူ:
စိတ်ဖိစီးမှု. စိတ်ဖိစီးမှုက၎င်း၏ဘဏ်များခြင်းသည်အလွန်များပြားသောအခါ, ကျနော်တို့ saner, နေ့ခင်းဘက်နာရီအတွင်းလျစ်လျူရှုမယ်လို့ပိုပြီးတားမြစ်ထားနယ်မြေများသို့ရွှေ့ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝအလျောက်ကာကွယ်တတ်၏။ အချို့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုအခြားသောက်စရာသို့မဟုတ်ပူးတွဲများအတွက် porn, သို့မဟုတ်ဖိနပ်အွန်လိုင်းမှာစျေးဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အဆိပ် Pick ။
ပျင်း။ ပျင်းမကြာခဏ2သတင်းရင်းမြစ်ထံမှလာ - "သင့်တယ်" ၏တွေအများကြီးနှင့်သင်၏အသက်တာကိုတစ်ဦးဖြည့်မယ့်အစားလိုလားနှင့်ဆွတစ်ခုမရှိခြင်း။ သငျ့သညျအားဖြင့်ငါသည်သင်တို့မဟုတ်ဘဲသင်တို့၏ဝိညာဉ်များနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုဖမ်းယူသောလိုထက်လုပ်ဖို့ထင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုလုပ်နေတာဆိုလို။ အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်, သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု - - သင် McD ရဲ့မှာဟမ်ဘာဂါကြော်များ၏ရွေ့လျားမှုမှတဆင့်သွားနေတယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းတစ်သင့်ရဲ့နှင့်သင်လျင်မြန်စွာပျင်းရနိုင်သည်။ မိမိအနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်နေ့လယ်စာအလုအယက်မှာသင်တို့ပတ်လည်မြား၏လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုပြောပြရန်တစ်လုပ်ဖော် - ဆွရှိလျှင်သင်လျော့နည်းပျင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ လုပ်ဖော်သို့မဟုတ်နေ့လယ်စာအလုအယက်မှပယ်ရှားတော်မူနှင့်သင်ပျင်းရချင်ပါတယ်။ သငျသညျချည်းနှင့် unstimmed ခံစားကြသောအခါ porn ဆွစာရေးပေးပါသည်။
မကျေနပ်မှု။ မကျေနပ်မှုသငျ့သညျနှင့်အတူကောင်းစွာပေါင်းဘော်ရောနှော။ သငျသညျလုပ်နေကြပါလျှင်သင်သည်အဘယ်သို့တွေအများကြီးသင့်တစ်စုံတစ်ဦး (သို့မဟုတ်သင်၏ဦးခေါင်းအတွက်အရေးပါသောစကားသံ) ဒီတော့ကပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဆောမကျေနပ်မှုများအတွက်လွယ်ကူသည်။ ဒါကြောင့်လုံလောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ရရှိသွားတဲ့တဲ့အခါမှာသင်ကထိုက်ကြောင့်, စိတ်သဘောထားထုတ်ပြုမူရန်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းသင်တို့ရှိသမျှသောနေ့ရက်တို့၌အဘယ်သို့ပြု၏စိတ်ခံစားမှုပင်ပန်းကြောင့်ဒါသငျသညျ4pm အချိန်မှာသင့်ရဲ့အလုပ်အပေါ်အွန်လိုင်းခိုးကြောင်ခိုးဝှက်။ သင်သင်၏မယားကိုသင်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ကတည်းကသင်သည်ချင်နေကြတဲ့, သင်ကထိုက်ခံစားရလျက်ရှိသည်ခံစားရကြောင့်ထိုသို့ပြုဘာလို့လဲဆိုတော့သူမကိုပြန်ရတဲ့အချို့လိုက်တယ်လမ်းအတွက်, 11 pm အချိန်မှာအွန်လိုင်းခိုးကြောင်ခိုးဝှက် (ဒီအားလုံးသငျ့စိတျထဲမှာတည်သည်နှင့်သူမပင်လျှင် ) သင်တွေးနေတဲ့အဘယ်အရာကိုမျှမစိတ်ကူးရှိပါတယ်။
လိင်။ သို့မဟုတ်မရှိခြင်း။ သင်သည်ဤစာရင်းတွင်ထိပ်မှာဖြစ်သင့်၏, ဒါပေမယ့်မကြာခဏပြုလုပ်မယ့်ထင်လိမ့်မယ်။ သို့သော်သိသာကြောင်းရှိပါတယ်။ သငျသညျလက်တွေ့ဘဝမပါဘဲရနိုင်အဖြစ်အဖြစ်မှန်အဖြစ်အနီးကပ် - သင်လိင်က, ဆုံးရှုံးပြတ်တောက်ခံစားရလျှင်, လိင်ပျင်း, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းတဲ့အကြီးအဖြေရှင်းချက်နဲ့တူပုံရသည်။
အဆိုပါပြဿနာကိုနောက်တဖန်ထိုအမဆိုတစ်ဦးမောင်းနိုင်ပါတယ်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန် porn အပေါ်မှီခိုဖြစ်လာတစ်ချိန်က, သင်စှဲရ, ဦးနှောက်ဓာတုဗေဒကျော်ကြာ, သင်အလားအလာစွဲလမ်းပေါ်မှာဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါလမ်းထွက်? အများဆုံးအလားအလာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကဲ့သို့သင်တို့တစ်ပြိုင်နက်2element တွေကိုဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အပြုအမူကိုသင်ပုံစံကိုချိုးဖျက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူအင်တာနက်ကိုထပ်ဖွဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမရှိတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (- အဘယ်အရာ ED ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဆိုပါသူတို့အားအကြံပြုသည်ထက်ပိုတဲ့ Viagra ပေမယ့်အအေးကြက်ဆင်မဟုတျပါဘူး - abstinence စိတ်ကူးယဉ် သံသရာကိုချိုးဖျက်ကူညီရန်နှင့်သင့်ဦးနှောက်ကိုပြန်လည်ထိန်းညှိရန် (ရှေးရှေးဤအကြောင်းကိုပြောဆိုရန်ဆန္ဒရှိနေကြသည်ရှိရာအရပ်၌သင်တို့က်ဘ်ဆိုက်များကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်)6လအတွင်းသို့မဟုတ်ကြာကြာများအတွက်) masturbating နေစဉ်။
နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ခံပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ချင်တာကိုလုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘဲလုပ်ချင်တာလုပ်ချင်ရင်လုပ်ချင်တာကိုဘဝမှာတိုးချဲ့ဖို့နည်းလမ်းရှာပါ။ အကယ်၍ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ညနေ ၄ နာရီ ၄ မိနစ်ကို offset လုပ်ရန်အခြားဆိုင်များကိုရှာဖွေပြီးသင့်ကွန်ပျူတာမှဆွဲထုတ်သွားပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်လျှင်, ditto ။ သင့်ရဲ့သူဌေး၊ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုမကျေမနပ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သင်ဘာတွေကိုပြောင်းလဲစေချင်သလဲဆိုတာကိုရှာဖွေပြီးပြောပါ။ ပိုပြီးခက်ခဲတဲ့တာဝန်တွေလိုအပ်ရင်အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာ decompress လုပ်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ကလိင်အကြောင်းပြောရင်၊ အတူတူလုပ်ပါ၊ သင်လိုချင်တာကိုရှာဖွေပြီးပြောပါ။
သင်ကလုပ်ဖို့မလိုပါ၊ ကွဲပြားစွာလုပ်ပါ။ ကလေးခြေလှမ်းများရေတွက်ရုံသာစတင်ပါ။ သငျသညျတူညီသောအရာကိုဆက်လက်လုပ်နေလျှင်သင်အတူတူပင်ခံစားဆက်လက်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါဆိုသည်ကားအားလုံးကိုလွယ်ကူပါတယ်, ဒါပေမယ့်လုပ်ဖို့မကြာခဏခဲယဉ်းသည်နားလည်သဘောပေါက်။ ဒါကြောင့်ထောက်ခံမှုရ - မိတ်ဖက်, မိတျဆှေ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှ။ သင်တို့သည်ဤမျှသင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ဘူးသောအရာကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အကူညီရယူပါ။
ဒီတစ်ခါလည်းက plug ကိုဆွဲထုတ်ဖို့အချိန်ပါပဲ။
ဆောင်းပါးနဲ့ချိတ်ဆက်ပါ - အရမ်းများနေလား
မှတ်ချက်များ - Robert Taibbi သည်လူသိများသောကုထုံးပညာရှင်၊ စာရေးဆရာနှင့်အကြံပေးများနှင့် ၄ င်းတို့၏ကြီးကြပ်ရေးမှူးများအတွက်ဖတ်စာအုပ်များရေးသားသူဖြစ်သည်။ ဒီ PT post မှာသူက porn-induced ED ကိုဖော်ပြပြီး porn & masturbation မပါပဲ ၆ လလိုအပ်မယ်လို့အကြံပြုထားတယ်။